मास्को फ्रान्स भिसा केन्द्र
सबैभन्दा रोमान्टिक ठाउँ पृथ्वीमा पेरिस मानिन्छ छ, त्यसैले विश्वभरिबाट मान्नेहरूले कम्तिमा एक पटक यो अद्भुत शहर मा प्राप्त र एफिल टावर वा को सौन्दर्य रमाइलो गर्न प्रयास गर्दै Notre Dame। तर फ्रान्सेली राज्य यसको भिसा नीति विशेष कठोरता र कठोरता संग लागू हुन्छ। रूसी पर्यटक यो एक सेन्जेन भिसा प्राप्त आफ्नो निवास स्थान मा फ्रान्स भिसा केन्द्र यसको दर्ता लागि लागू गर्न आवश्यक छ, यो युरोपेली देश भ्रमण गर्न।
तपाईं फ्रान्स लागि भिसा कहाँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ?
धेरै मानिसहरू कहिल्यै तपाईं जाने र कहाँ सुरु गर्न आवश्यक छ जहाँ सुरुमा थाहा छैन, यो सेन्जेन क्षेत्र मा प्रवेश को लागि परमिट प्राप्त लागि प्रक्रिया सामना गरेका छन्। पहिलो, तपाईं, सबै आवश्यक कागजात र साइन अप सङ्कलन अठार टुक्रा को मात्रा मा रूस को क्षेत्र मा, फ्रान्स मा विशेष भिसा केन्द्र तिनीहरूलाई लिनु आवश्यक छ। प्रत्येक क्षेत्र र आफ्नो अनुहार मा दर्ता फ्रान्सेली राज्य कम्पनी रूसी नागरिक को सेन्जेन भिसा मदत गर्ने अधिकार छ।
त्यहाँ राजधानी को बासिन्दा लागि युरोपेली देश प्रवेश गर्न अनुमति प्राप्त गर्न दुई तरिकाहरू छन्। तिनीहरूले निम्न संस्थाहरु लागू गर्न सक्नुहुन्छ: फ्रान्सेली दूतावास, भिषा आवेदन केन्द्र (मास्को) र सबै भन्दा राम्रो विकल्प चयन गर्नुहोस्।
को दूतावास को downsides को एक एक नियुक्ति केही महिना र व्यक्ति मा आउन कागजातहरू को पेश्की लागि भर्ना गर्न आवश्यक छ भन्ने छ। तर तपाईं एक फ्रान्सेली भिसा अप आकर्षित यदि त यो मध्यस्थ गर्न अतिरिक्त लागत सहन हुनेछैन। र तपाईं हात द्वारा लिखित वकील को एक शक्ति, प्रस्तुत गरेर आफ्नो पत्नी वा पति मा कागजातहरू प्राप्त गर्न सक्छन्।
फ्रान्स भिषा केन्द्र मास्को मा लाभ को एक नम्बर छ। पहिले, एक undoubted फाइदा यो लामो लाइनहरू र दस मिनेट अधिकतम खडा गर्न आवश्यक छैन भन्ने छ। कम्पनी मा परामर्श लागि, तपाईं लगभग हरेक दिन जाने र जरुरी प्रश्नहरूको जवाफ प्राप्त गर्न सक्छन्। र पनि, तपाईं कुनै पनि कागजात को प्रति चाहनुहुन्छ भने, विशेष आफ्नो ग्राहकहरु को सुविधा लागि फ्रान्स भिसा केन्द्र मिसिन वा कम्प्युटर प्रतिलिपि तपाईं हटाउन सकिने मिडिया बाट केही छाप्न आवश्यक मामला मा एक मुद्रक प्रदान। यो संस्थाले बढी मर्यादा त्यहाँ यो प्रक्रिया सहमत पछि, कुरियर द्वारा पासपोर्ट को वितरण व्यवस्था गर्न एक संभावना छ कि विचार गर्न सकिन्छ।
यो कम्पनीको मात्र नकारात्मक -, केन्द्र लागत थप सेवाहरू मध्यस्थकर्ताको रूपमा अभिनय लागि आवश्यकता।
आवश्यक कागजात: सूची
तपाईंलाई फ्रान्सेली भिसा केन्द्र लागू गर्नु अघि पहिलो कुरा गर्न मास्को छ फ्रान्सेली राज्य को दूतावास को वेबसाइट ले आवेदन फारम डाउनलोड र यो भर्नुहोस्। यो विद्युतीय प्रणाली गर्न सकिन्छ।
त्यसपछि जस्तै सबै आवश्यक कागजात, भेला:
विमान टिकट राउन्ड यात्रा;
बुकिंग होटल, त्यहाँ फ्रान्स निमन्त्रणा छ भने;
प्रमाणपत्रहरू रोजगारीको वा अध्ययन;
एक पासपोर्ट र आफ्नो पासपोर्ट प्रतिलिपि;
फ्रान्सेली गणतन्त्र को दूतावास, कतै देश यात्रा लागि पर्याप्त हुनेछ जो आय को आवश्यक संख्या, संकेत पनि, कुनै पनि रकम निर्दिष्ट को वित्तीय स्वयंसमर्थता पुष्टि बैंक बाट बयान बारे मा भूल छैन;
दुई टुक्रा को मात्रा मा फोटो, तिनीहरूले निलो पृष्ठभूमि र 3,5x4,5 सेमी को आकार हुनुपर्छ।
तपाईं कुनै पनि भिन्नता वा समस्या फ्रान्स फोटो भिसा केन्द्र संग को मामला मा, केवल आफूलाई लागि भिसा लागि लागू यदि यात्रा समयमा आफ्नो संस्थाहरु भित्र perefotografirovat अनुमति दिन्छ। तर भिसा एक पास नजिक नातेदार मा जारी गरिएको छ भने, यो फोटो मा टिप्पणी सच्याउन सक्षम हुन फोटो स्टुडियो लिइएका चित्रहरु संग एक फ्लैश ड्राइव लिन उपयुक्त हुनेछ। तर, सेप्टेम्बर 2015 मा आवेदक सुरुमा बायोमेट्रिक प्रक्रियाहरु undergo गर्न एक्लै आउने गर्नुपर्छ, र त्यसपछि सबै आवश्यक छ र हराइरहेको कागजातहरू वकील को लिखित शक्ति अनुसार नातेदार ल्याउन सक्छ एक उर्दी जारी।
फोन वा अनलाइन सबै भन्दा राम्रो पूर्व-दर्ता को केन्द्र भ्रमणको अघि।
नाबालिग लागि भिसा
त्यस अवस्थामा, बच्चाहरु अन्य मा, यो यात्रा मा सहभागी छैन, आमाबाबुले एक साथ यात्रा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले रूस देखि एक बच्चा निष्कासन सहमति पुष्टि कागजात आवश्यक हुनेछ।
यात्रा यो मामला मा, सारा परिवार पूर्ण जबर्जस्ती गर्न जाँदै छ भने, भिसा अवधि एक सानो सदस्य कडाई हुनेछ सर्तहरू यात्रा को प्रश्नावली निर्दिष्ट पालना। तपाईं भिसा को वैधता को लामो अवधिको लागि दुवै आमाबाबुले देखि एक notarized सहमति ल्याउन गर्दा यो मामला गर्न विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ।
बच्चाको भिसा दुवै आमाबाबुले देखि वकील को एक शक्ति को प्रावधान बिना छोटो समय भित्र धेरै यात्राको लागि भिसा परमिट को मामला मा जारी गरिनेछ मात्र पहिलो यात्रा मा।
सम्पर्क विवरण संस्थाहरु को
भिसा प्रक्रिया मास्को मा आधिकारिक फ्रान्सेली भिसा केन्द्र बताइरहेका, पारित गर्न राम्रो छ। सडक Bolshaya Yakimanka सडक मा स्थित मीरा एवेन्यू, भवन 64, तेस्रो तल्ला, वा दूतावास, 45 निर्माण: निम्नानुसार तिनीहरूलाई सम्बोधन।
+7 (495) 504-37-05 वा +7 (499) 681-13-60: फ्रान्सेली गणतन्त्र मध्यस्थ कम्पनी को लोकपाल को कार्यालय एक यात्रा, फोन नम्बर मा पूर्व-रेकर्ड भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ। उनको दैनिक सप्ताहन्तमा बाहेक, 16:00 गर्न 9:00 देखि काम गर्दा।
फ्रान्सेली दूतावास रेकर्डिङ निम्न टेलिफोन नम्बर मा सञ्चालन गरिएको छ: +7 (495) 937-15-00।
फ्रान्सेली संभावना मीरा मा मास्को मा भिषा आफ्नो ठेगाना मा केन्द्र सकारात्मक प्रतिक्रिया धेरै पाए। एक भिसा प्राप्त मदतको लागि यहाँ सम्बोधन गर्ने धेरै ग्राहकहरु, गुणस्तर र परिचालन प्रदर्शन को कार्यान्वयन लागि संस्थाले को कर्मचारीलाई कृतज्ञ छौं। दाखिला केही मिनेट मा ठाँउ लिन्छ, र एक हप्ता एक सूचना प्राप्त गर्न अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
मानिसहरू कर्मचारी कम्पनी को कार्यालय मा काम, मैत्री सही र योग्य मान्छे को कुरा। उहाँलाई पाठ्यक्रम, कम्तिमा एक पटक कुरा गर्नेहरूलाई मेरो अर्को विकल्प आफ्नो पक्षमा हुनेछ।
भ्रमण अपरेटर "उमंग" यसको सञ्चालन निलम्बित गरेको छ। "उमंग" नयाँ यात्रा एजेन्सीहरू को नियम परिवर्तन
Astrakhan रिजर्व। यात्रा सुझाव
आकर्षण राजधानी: कजान रेलवे स्टेशन (मेट्रो स्टेशन "Komsomolskaya")
डिज्नी वर्ण: सबै भन्दा राम्रो छवि र चलचित्र एनिमेसन
परमेश्वरको आमा "साइन" को मन्दिर। मन्दिरमा Hovrino इतिहास प्रसिद्ध छ, सेवा को अनुसूची, फोटो
Wrestler, अभिनेता, राजनीतिज्ञ Dzhessi Ventura: जीवनी, Filmography
जई दूध: नुस्खा
खरीदारों र ग्राहकहरु को लागि 62 खाता
ओवन स्वादिष्ट र सरल मा Catfish (स्टेक) कसरी खाना पकाउनु?
एक प्रतिजन के हो? एंटीबडी र antigens
टाटा Grandeur: प्राविधिक विनिर्देशों, परीक्षण र कार मालिक को समीक्षा
एक कोट संग जूता। क्लासिक र फेसनदार संयोजन कसरी लगाउन
यो राम्रो "Stolplit" भोजन छ? उपभोक्ता समीक्षा गुणस्तर सुनिश्चित
पास्ता नाविकता को दृष्टि से लागि नुस्खा - छिटो र स्वादिष्ट तयार